‘त्यो कुरा मलाई होईन, देउवालाई सोध्नुहोस्’
सत्तारुढ दल नेपाली काग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. रामशरण महतले संविधान संशोधन विद्येयक र निर्वाचनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले अब सरकारले विलम्ब नगरीकन निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने समेत माँग गरे। यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले डा. महतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
हिजोको बैठकमा के–के निर्णय भयो ?
निर्णय केही पनि भएन । वार्ता जारी गर्ने भन्यो । योभन्दा अगाडिका बैठकजस्तै भयो । सरकार पक्ष र मधेशी मोर्चा पक्षबीचमा एउटै धारण आउन सकेको छैन् । सहमती जुटी सकेको छैन् । हामी चाँडो निर्वाचन गर्ने गर्ने पक्षमा छौं । उहँहरु संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा नजाने र हामी निर्वाचन हुन दिन्नौ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । संविधान संशोधन गर्नको लागि दुई तिहाईको बहुमत नभईकन अरु दलहरुसग सहमति नभई संविधान संशोधन हुन सक्दैन् । त्यसकारण संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जान्छ । निर्वाचनको मिती घोषणा गरौ भन्ने सरकारी पक्षको भनाई हो, यसमा अझै सहमती जुटिसकेको छैन् ।
मधेशी मोर्चाको नेताले भनिसकेका छन् चुनावको मिती घोषणा गरे सम्बन्ध बिच्छेद हुन्छ भनेर ?
यस्तो अतिवादी सोच कसैले पनि राख्न हुदैन् । उहाहरुले भन्दै जानु हुन्छ सबैले अतिवादी सोच मात्र राख्ने हो भने मिलनको बिन्दु आउदै आउदैन । आखिर सम्बन्ध टुट्छ भन्ने हो भने डेमोक्रेसिमा विस्वास राख्ने हो भने जनतामा जान किन बाधा? जनतामा जान जून भनाई छ जून एजेन्डा छ त्यो भनाइ लिएर जनतामा जाने । यो चुनाव भनेको त जनतामा जाने एउटा अवसर पनि त हो नि । यो अवसरलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
मधेशी मोर्चाबिना निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकार तयार नभएको हो ?
त्यो त उहँलाई नै सोध्न्होस् । म त सरकारको प्रवक्ता होइन यो त सरकारले गर्ने निर्णय हो । उहँ चाही सहमतीबिनै घोषणा गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ । सहमति आइसकेको छैन् । हामी चाही छिट्टै निर्वाचन हुनुपर्छ यो स्थानिय निकायलाई प्रनिधित्व बिहिन बनाएर भद्रगोल अवस्थामा राख्नुभएन । यो एक वर्षभित्र तीन वटा निर्वाचन त पूरा गर्नुपर्छ । स्थानिय निकायको निर्वाचन त यही चैत वा बैशाखमा गरिसक्नुपर्छ ।
नेपाली काग्रेस पनि अब तहको नभएर स्थानीय निकायको निर्वाचनको पक्षमा हो ?
स्थनीय तहको निर्वाचन गर्दा धेरै भनाइहरु आउन सक्छन् । हामीले पहिलेदेखि भनेको कुरा हो । स्थानीय निकायको चुनावमा जँदा सजिलो हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनको बारेमा धेरै समस्या आउछन् । कानूनी जटिलता छन् । हामी चुनावको लागि तयार हुनुपर्यो ।स्थानीय निकायको चुनाव गर्नको लागि उपेन्द्र यादवले सहयोग गर्छु भन्नु भयो रे नि? म सँग रामचन्द पौडेलले भन्नु भएको छ ।
त्यसो हो भने झन राम्रो भयो नि । त्यसो भनेको हो भने त्यहि बाटोमा जानुपर्छ ।
संविधान संशोधन नभईकन चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन ?
संविधान संशोधन र चुनाव फरक कुरा हुन् । यो नभई यो हुन सक्दैन भनेर भनियो भने अतिवाद हुन्छ, यस्तो अतिवादी सोच कसैले राख्नुहुदैन ।
प्रधानमन्त्रीले मधेशवादी दलहरूलाई सँगै लिएर जान्छु भन्नु भएको छ नि ?
त्यो राम्रो कुरा हो । सबैलाई साथमा लिएर चुनावमा जान सकियो भने राम्रो हुन्छ । तर मैले भनेको मात्रै सही हो अरुले भनेका कुरा सबै भ्रम हो भन्ने खालको मनस्थितिको बिकास गर्नु भएन् । उहँले भनेको कुराले परिणाम दिनुपर्यो ।
परिणाम चाहियो तर निर्वाचनको लागि समय कम छ नि महत जी ?
हो, त्यही भएर चाडो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाई हो ।प्रधानमन्त्रीले काग्रेसको कुरा सुन्नु होला त ?
मान्ने नमान्ने उहँको कुरा हो । तर मुलकको भलाईको लागि सबैले सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । देशको आवश्यकत्ता उहँले बुझ्ने कुरा हो । चुनावलाई सार्ने कुरा चुनाव नगर्ने बाहना हो । मधेशवादी दलहरुले अतिवादी सोच राख्नु भएन, उहाहरु पनि चुनावमा जानुपर्छ । आप्mना माग जनताको बीचमा राख्नुपर्छ ।
संविधान संशोधन अहिले नहुदा के हुन्छ ?
संविधान खोतल्दै जाने हो भने यो पनि हुदैन त्यो पनि हुदैन जस्ता तमाम कुरा आउछन् । अर्को कुरा, संविधान संशोधनको कुरा एकैपटक हुने कुरा पनि त होईन । बिस्तारै हुने कुरा हो । कुनै कुरा असजिला छन् । यतिकै निर्वाचनमा जान्न भन्नु बुद्धिमान काम होईन । अरुलाई रोक्नु, धम्की दिनुजस्ता कुरा वाईयात हुन् । संसदमा टेबुल भएको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नुपर्दैन ?
छिनोफानो हुन्छ नि । टुगो नलागी अरु काम हुदैन भन्नु ब्यर्थ हो । प्रधानमन्त्री बन्दा कोसग के सम्झौता गर्नुभएको छ ? त्यो त उहाहरूसगै सोध्नुस् ।
देशलाई निकास दिनको लागि काँग्रेसले के गर्छ त ?
त्यो कुरा हाम्रो पार्टीका सभापतिसँग सोध्नुस् ।
सुन तस्करीको कुरा गरौ, किन यस्तो धेरै तस्करी बढेको हो तपाई त धेरै पटक अर्थमन्त्री बनिसक्नुभएको व्यक्ति हो, बताउनुस् जनता जान्न चाहन्छन ?
चोरी भएको छ । दोषीलाई कडा कारवाही हुनुपर्छ ।
आर्थिक नीति कमजोर भएको हो ?
आर्थिक नीति होईन, प्रशासन कमजोर भएको हो । राजनीतिक अस्थिरताले प्रशासनलाईपनि प्रभाव पारेको छ ।
तपाईकै पार्टीको नेता विमलेन्द्र निधी गृहमन्त्री हुनुहुन्छ ? उहँले काम गर्नसक्नु भएन नि ?
गृहमन्त्री मात्रै ले राकेर केही हुदैन् । सबै प्रशासन लाग्नुपर्यो । समग्रमा हेर्दा प्रशासन कमजोर भएकै हो । यसको मतलव यो पनि होईन । केही कामै भएको छैन् भन्न पनि त मिल्दैन ।
काग्रेसको महाधिबेशन भएको १० महिना वितिसक्यो तर पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन् नि ? जिम्मेवार नेताको हैसियतले यसबारेमा के भन्नु हुन्छ?
यो भएन, त्यो भएन भन्दापनि सकारात्मक कुराको बारेमा बहस गर्नुपर्यो । यसको बारेमा समभापतिसग सोध्नुस् यसको जवाफ मसँग छैन् ।